porn နှင့်အမူအကျင့်စှဲကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများလူငယ်များအတွက်စိတ်ရောဂါနှင့် neuro-ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမမှန်ယနေ့ကြီးထွားလာနံပါတ်များကိုသတင်းပို့ပါ။ စိတ်ကျန်းမာရေးပေါ်တွင်အင်တာနက်နှင့်အတူ compulsive အပြန်အလှန်များ၏သက်ရောက်မှုမှ ပို. ပို. သုတေသနမှတ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း, ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမသာပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဆုကြေး Foundation ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ညစ်ညမ်း-မောင်းနှင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအထူးသဖြင့်ယောက်ျားအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ မကြာသေးမီကထုတ်ဝေတစ်ဦးက ဆန်းစစ်ခြင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် et al ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်နယ်များ
ကောင်းမွန်သောသတင်းအတွေ့အကြုံကိုစပ်လျဉ်းဘယ်လိုဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများပိုကောင်းတဲ့ဥာဏ်နှင့်တကွ, များစွာသောလူ recover နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှကျွန်ုပ်တို့၏သုခချမ်းသာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကလွှမ်းမိုးစေနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏နားလည်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာလိုပါကနှိပ်ပါ ဒီမှာ.